Nkọwapụta --lọ ọrụ - Dongguan Enuo Mold Co., Ltd.
Dongguan Enuo akpụzi Co., Ltd. bụ a enyemaka nke Hong Kong BHD Group, ndị isi azụmahịa bụ plastic ebu imewe na n'ichepụta. Ọzọkwa, Enuo akpụzi bụ OEM factory aku metal akụkụ CNC machining, prototype ngwaahịa R&D, nnyocha nfiksi / nlele R&D, plastic ngwaahịa ịkpụzi, spraying na nzukọ.
Companylọ ọrụ ahụ nwetara ngbanwe osisi ọhụrụ na Eprel 2017, na mpaghara nke mita 2,000, Ndị a bụ nzukọ nzukọ atọ nke ogbako na ogbako ma jupụta na CNC machining centres, EDM sparks machine, igwe igwe, igwe egweri, ule na akụrụngwa ndị ọzọ kpamkpam karịa 30 tent. Ogogogo kachasị nke kreen bụ 15 tọn. Kwa afọ mmepụta bụ ihe karịrị 100 tent na ndị kasị ibu Ebu anyị mere bụ ruo 30 Tọn. E jiri ya tụnyere ahịa ahịa, isi ịsọmpi nke ụlọ ọrụ ahụ sitere na ndị ọrụ injinia na ndị otu na-ahụ ọrụ Ndị isi njikwa na ngalaba ọrụ, imepụta na imepụta ihe niile nwere ihe karịrị afọ iri na asatọ ahụmịhe ọrụ na ahụmịhe nlekọta ngalaba, ya mere, ha nwere ike ịmara nhazi ego iji dozie isi ihe mgbu abụọ na ụlọ ọrụ-ogo na oge . Tù ndị mepụtara etinyewo aka kpọmkwem na nhazi ebu nke Marelli AL / Magna / Valeo auto auto; Mahle-Behr ikuku & mmiri na akpaaka tank na obi jụrụ ofufe mgbodo akụkụ; Inalfa auto sunroof akụkụ; HCM ime na mpụta ngwa akụkụ; INTEC / ARMADA (Nissan) akụkụ ngwongwo akpaaka na akụkụ ụlọ LEIFHEIT. Ndi oru ngo a ebutela ebuzi mmepe nke ikuku CK / Mahle-Behr / Valeo na okpomoku na ihe nkpuchi nke ihe nkpuchi; Sogefi uzo mmiri na uzo ozo, Sinocene / Toyota ihe ndi ozo na ihe ndi ozo, EATON ihe ndi ozo, ihe ndi eletriki ABB na ngwa ahia IKEA. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ guzobere mmepe mmepe na ndị òtù BHD ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnye ọrụ nkwụsị site na nhazi na ịmepụta, nyocha ihe nyocha na ịmepụta, ngwaahịa ọgwụ plastik, spraying na nzukọ.
Banyere Enuo ebu
Dongguan Enuo akpụzi Co., Ltd. bụ a enyemaka nke Hongkong BHD Group, plastic ebu imewe na n'ichepụta bụ ha isi azụmahịa. Ọzọkwa, nnyocha eletrik R&D, plastic ngwaahịa ọgwụ, spraying na nzukọ na-emekwa ụfọdụ na.
Companylọ ọrụ ahụ rụzigharịrị osisi ọhụrụ na Eprel 2017, ogige ogige ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke mita 3,000, nke ejiri nkenke
CNC machining emmepe, EDM ebua igwe, -egwe ọka igwe, egweri igwe,ule na akụrụngwa ndị ọzọ kpam kpam karịa 30 set, na-atọ ebu nzukọ dị iche iche na-gụnyere.
Daalụ maka nkwado ndị ahịa niile
Nulọ ọrụ Enuo na-enyere gị aka ịga nke ọma!
Maka Ajụjụ Azụmaahịa